La dépêche de MadagascarBESO FISAKA	Categorie: BESO FISAKA	Teren-ko masaka	20/01/2017	Rédigé par:	Vonjy RADASIMALALA
Laisser un commentaire	Aely ny resaka ankehitriny fa ny lanitra mihitsy no efa tsy manaiky izao fitondrana izao. Asa aloha marivo salosana loatra ve izay mampiely izany feo izany sa fitia mba te handranitra? Any Eoropa mantsy amin’izao andro izao dia mamely mafy ny hatsiaka, hatsiaka izay mbola tsy fahita hoy ireo manam-pahaizana. Efa mahatratra an-jatony ankehitriny ireo…
Aoka izay ny fifanomezan-tsiny	18/01/2017	Rédigé par:	Vonjy RADASIMALALA
Laisser un commentaire	Mimenomenona toy ny saka noana ny sasany amin’izao fotoanan’ny krizin-drano izao. Saingy tena famahana ny olana ve ny fimenomenonana toy izany ? Ny ohatra entin-dry zareo Eoropeana no tokony halain-tahaka amin’izao vanim-potoana sarotra izao. Mamely mafy tokoa mantsy ny hatsiaka any Eoropa any amin’izao fotoana izao, saingy tsy ny fimenomenonana no henonao eran’ny tambajotra sosialy…
Tsy alohalika intsony ny ranom-bary	16/01/2017	Rédigé par:	Vonjy RADASIMALALA
Laisser un commentaire	Manakoako eran-tany ankehitriny ny fivadibadiky ny toetry ny andro. Eto Madagasikara moa dia efa mibaribary toy ny tafika andrefan-tanàna izy ity. Tondra-drano ankehitriny ny faritra atsimon’ny Nosy, raha toa kosa ka ifampitadiavana izay hatsakana rano eto Antananarivo. Ny mahavelom-bolo kosa dia, efa miha tonga saina amin’izany ny rehetra ankehitriny. Samy efa manomboka miketriketrika ny atidoha…